Erdogan oo go’aan lama filaan ku noqday Ruushka qaaday xilli xaalada Ukraine sii cakirmay | Arrimaha Bulshada
Home News Erdogan oo go’aan lama filaan ku noqday Ruushka qaaday xilli xaalada Ukraine sii cakirmay
Erdogan oo go’aan lama filaan ku noqday Ruushka qaaday xilli xaalada Ukraine sii cakirmay
Bulsha:- Madaxweynaha Dalka Turkiga Rajab Dayib Erdogan,ayaa khadka taleefoonka kula hadlay dhigiisa Ukraine Vladamir Salaneski isagoo codsaday in xaalada wada hadal lagu dhameeyo xabadana la joojiyo.
Madaxweyne Salaneski,waxa lagu arkay galabta isagoo dhex socda qaar ka mid ah waddooyinka Caasimada Kiev shaacana ka dhigay in aysan is dhiibi doonin.
Dhinaca kale xaalad cakiran ayaa ka jirta Ukraine oo weli duqeymo diyaaradeed iyo gantaalo qalab iyo gaadiid laga soo ridayo ah waxay ku dhacayaan Dalkaasi.
Maraakiibta ruushka oo isku dayey inay dhinaca badda madoow ka weeraraan waddanka Ukraine ayaa la hor istaagay.
Turkiga ayaa xirtay badda madow iyadoo tallaabadaas uu soo dhaweeyey Madaxweyne Salaneski oo ku tilmaamay mid ay Turkigu ugu hiiliyey dalkiisa.
Dhimashada guud 148 ayey ka badan tahay dhaawacana tiro rasmi ah lama sheegin tan iyo inta uu bilowday duulaanka ruushka ku qaaday Ukraine Labo cisho ka hor.